Burundi oo shaacisay tirada askarta looga dilay weerarkii Ceel-Baraf | KEYDMEDIA ONLINE
Burundi oo shaacisay tirada askarta looga dilay weerarkii Ceel-Baraf
Midowga Afrika (AU) iyo dalalka ay Ciidamada ku deeqaan ayaan caadiyan tirada khasaaraha kadib weerarka. Burundi iyo AU-da midkoodna kama jawaabin codsiyada ku saabsan khasaaraha.
BURUNDI - Milateriga Burundi ayaa Maanta sheegay in 10 ka mid ah askarta ka joogta Soomaaliya lagu dilay weerar lagu qaaday saldhig ay ku leeyihiin Ceel-Baraf, iyadoo ilo ku sugan Muqdisho ay sheegeen in tobaneeyo askari lagu dilay.
Telefishinka dowladda Burundi oo soo xiganaya afhayeenka Ciidamada Floribert Biyereke ayaa sheegay in 25 askari oo kale lagu dhaawacay weerar Talaadadii lagu qaaday xero u dhow tuulada Ceelbaraf ee bartamaha Soomaaliya, halka 20 “argagixisada Al Shabaab ah” sidoo kale lagu dilay.
Ilo wareedyo dhanka ammaanka ah ayaa sheegay in howlgalo dhowr ah oo daba socday ay socdeen kadib markii dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab oo xiriir la leh Al-Qaacidda ay soo galeen xerada maalin kahor. Khasaaraha guud ayuu sheegay in aan wali la cadeyn, balse waxaa la dilay “tobaneeyo” askar ah, waxaana goobta laga daadgureeyay ku dhawaad ​​20 dhaawac ah.
Al-Shabaab ayaa sheegtay inay 173 askari ku dishay weerarka, islamarkaana la wareegtay saldhigga, oo dadka degaanka loo fasaxay inay bililiqeystaan agabkii yaallay.
Soomaaliya ayaa isku diyaarinaysa in ay qabato doorashada madaxtinimo oo muddo dheer dib loo dhigay. Loolanka siyaasadeed ee Farmaajo iyo Rooble ayaa sabab u noqday in laamaha amniga ay kala qeybiyaan, iyagoo ka weecday dagaalka Al-Shabaab.
Comments Topics: burundi soomaaliya